कुलमान पुनःनियुक्त नगरिए ओली सरकारलाई महङ्गो पर्ने पक्काः 'नेफिन'ले समेत निकाल्यो यस्तो कडा विज्ञप्ती, बालुवाटारमा हलचल ! (विज्ञप्तीसहित) - Nepal Aawaaj
कुलमान पुनःनियुक्त नगरिए ओली सरकारलाई महङ्गो पर्ने पक्काः ‘नेफिन’ले समेत निकाल्यो यस्तो कडा विज्ञप्ती, बालुवाटारमा हलचल ! (विज्ञप्तीसहित)
Moon Sampang Rai — September 21, 2020 add comment
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) ले कुलमान घिसिङ जनजाति भएकै कारण हटाइएको आरोप लगाएको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले सरकारमाथि यस्तो आरोप लगाएको हो । उनलाई पुनः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्न पनि माग गरेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ गत भदौ २८ गते कार्यकाल सकिएपछि बिदा भएका थिए । उनको समर्थनमा पछिल्लो समय विभिन्न सरकारविरोधी आन्दोलन र अभियान एवं प्रदर्शन हुदैँ आएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनःनियुक्तिको सम्बन्धमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा उहाँको कार्यकाल पुरा भएको यतिका दिन बितिसक्दा समेत नेपाल सरकारले आजसम्म कुनै निर्णय नलिएकोप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।